Wasiirka Amniga Hirshabelle oo Sheegay in AJaanibta Shabaab ay ka buuxaan deeganadooda. - Awdinle Online
Wasiirka Amniga Hirshabelle oo Sheegay in AJaanibta Shabaab ay ka buuxaan deeganadooda.
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamad Cabdiraxman Kheyre ayaa waxaa uu sheegay in Ajaanibta ka tirsan Alshabaab ay kusoo Firxadeen Deegaanada Hirshabelle.
Wasiirka oo u waramay Universal Tv,ayaa sheegay in Saraakiisha ugu sareysa Alshabaab ay kasoo Carareen Gobolka Sh.hoose sababtuna ay tahay Howlagalada ay ciidanka ka wadaan Gobolkaas.
Wasiir Kheyre ayaa sheegay in Culeys badani ay kala Kulmeyn Howgalada Sh.hoose Sababtuna ay tahay in Ciidamada Shabaab iyo Ajaanibtooda ay galeen howdka deegaanada Hirshabelle.
Waxaa uu sheegay in dhibaatooyinka ay qayb ka noqdeen in deegaanada hirshabelle ay ka dhacaan falal lidi ku ah amaanka.
“Waayihii dambe sidaad la socotaan waxaa jiray operation ka socday dhankaa gobolka Shabeellaha Hoose, Koonfur Galbeed; operation-kaas wuxuu noo keenay culeys aad u fara badan maadaama nimanka argagixisada ah ay lasoo carareen dadkii ajaaniibta ahaa ee dalka yimid iyo inta muhiimka u ahayd waxay lasoo galeen dhulka howdka ah oo isku xirta labada gobol – Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan,” ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamad Cabdiraxman Kheyre ayaa waxaa rajo Wanaagsan ku muujiyey in ay xal u raadinayaan Alshabaab kasoo Talaabaya Gobolada kale ee dalka kuwaas oo gaaray Deegaanada Hirshabelel.
Beesha caalamka iyo Dowlada Dhexe ayuuna sheegay in ay Arintaas kala hadleen Madaama Dhinacyadaas ay kaalin ka qaadan karaan.
Geesta kale Wasiirka ayaa waxaa uu ka hadlay Qaraxyada ka dhaca wadada Xiriirisa Muqdisho iyo jowhar Kaas oo ku dhaw in ay xiranto.
Waxaa uu sheegay in sabab ay u tahay Miinooyinka badan ee Jidkaas shabaab aad u badan oo Gobolka sh.dhexe ku sugan sida uu hadalka u dhigay.
Ciidamadda kumaandooska Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa caalami ah oo isugu jira AMISOM iyo Mareykan ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay howlgal saf-balaaran leh ka wadday Shabeellaha Hoose.
Tan iyo markii laga xoreeyay magaalooyinka waaweyn sidda caasimadda Muqdisho, Al-Shabaab waxaa fariisin u ahayd gobolada, iyaddoo xaruntooda ugu weyn ay haatan tahay Jilib,oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe.
Previous articleSababta ay isku casishay Madaxii Wada-xaajoodka Ganacsiga ee Soomaaliya ee Geneva?.
Next articleDadaalka Guddoomiye Cabdi Xaashi Federaalka Soomaaliya Ma Ku Badbaadi Doonaa?